Day: Mee 16, 2020
Ejiri PTTBank EFT Sistemu na Central Bank System
Enwere ike ịme azụmahịa EFT ozugbo na akaụntụ PTTBank abanye na sistemụ Central Bank EFT. Na-ezute na Turkey otu n'ime ndị ahịa kachasị ukwuu nke akụrụngwa akụrụngwa pttbank, puku ụlọ ọrụ puku ise, ATM dị nso puku anọ, [More ...]
Oge njem ụzọ ụgbọ oloko na Istanbul maka mmachi ụbọchị 4
Na okirikiri nke Mịnịsta nke ime ụlọ, a ga-etinye iwu ịghafe gafee Istanbul na 16-17-18-19 May. Iji gbochie ụmụ amaala anyị bụ ndị nwere ọrụ n'ihi ọrụ mmanye ha na ndị ọrụ ahụike n'oge mmachi, [More ...]
Akçaray Trams kpuchitere kilogram 85 kwa ọnwa
Kocaeli Metropolitan Munçsç Akçaray tram emeela njem puku kilomita iri asatọ na asatọ n'ọnwa gara aga, na-enye ụmụ amaala ezigbo ọrụ, nke dị mma ma dị ọcha. Passgabiga trams Akçaray, nke ghọrọ akara nke obodo [More ...]
Annunciation nke Istanbul Bus Station Ekrem İmamoğlu
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu nyochara ọrụ nrụzigharị na Grand Istanbul Bus Terminal, nke ghọrọ nrọ dị egwu nke ụmụ amaala na afọ ndị gara aga. İmamoğlu kwuru, "Anyị echefuru ọdụ ụgbọ ala Istanbul, nke echefuru, [More ...]
Imamoglu, onye njem Bandirma Ferry
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu si na Galata Quay kpọọ oku, mmalite mbido Atatürk si Istanbul gaa Samsun ya na ndị Bandırma Ferry: [More ...]
Ihe nkiri sịnịma ụgbọ ala nke İzmir nke polzmir gbara ama gbara ama cha cha. Citizensmụ amaala Izmir, bụ ndị na-enweghị ike ịhapụ ụlọ ha n'ihi usoro nke coronavirus, hụrụ mkparị na nyocha ihuenyo onyunyo n'otu isi isii. Obodo Izmir [More ...]
Iri oriri na nkwari akụ dị na ntanetị na Mee 19
Obodo Izmir Metropolitan na-eweta ọ joyụ nke May 19 n’ụlọ a n’oge ụbọchị corona. Na mgbakwunye na ọtụtụ ihe omume ga-ebipụta na nyiwe dijitalụ, ọ na-ahazi asọmpi akpọrọ Online Treasure Hunt. 7 awa 19 nkeji [More ...]
Bayraktar TB2 UAV Nnyefe na Director General Of Security
Baykar Defense nyefere Bayraktar TB2 atọ nke ụgbọ agha ndị anaghị agha (UAVs) na Departmentlọ Ọrụ Ndị Isi ụgbọ nke Ngalaba Na-ahụ Maka Nchebe. N'okwu ahụ, Onye isi ala nke ndị isi ala Turkey, Industrylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchebe. Dr. Ismail [More ...]
Ntọala UAV guzosiri ike na Cizre District nke Şırnak
E guzobere Iwu Agwara Ọgbọ (UAV) Iwu na Cizre nke Şırnak, n'okpuru Iwu Gendarmerie General maka Bayraktar TB2 ụdị SİHAs. Na nkwupụta nke Mịnịsta nke ime obodo Süleyman SOYLU, [More ...]
Anyị bụ Ndị Europe mbụ na ụwa nke abụọ na Production White Goods Production
Minista Mmezi na Teknụzụ Mustafa Varank, ngalaba ngwongwo ọcha bụ otu n'ime mgbanwe ihu Turkey na-ekwupụta, "olu mmepụta, ntụgharị, gbakwunye uru ma na-enyere obodo anyị aka na mbupụ na-ebute ụzọ na mmepe. Nso zuru oke [More ...]
Usoro uzo ALO ​​gara n’ihu n’enye ndi obodo
Usoro 'ALO', na-arụ ọrụ n'okpuru nhazi nke Ministry of Family, Labour na Social Services, Conservationcy Press Press, na-achọsi ike na usoro nke ịlụ ọgụ maka ụdị coronavirus ọhụrụ. Onye ezinụlọ, ndị ọrụ na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ Zehra [More ...]
Emere Covidien-19 Copei nke Mmebe n’obodo 81 nke Turkey Peace Trust
N’otu oge n’obodo niile iji lelee ma emejuputara mkpebi nke ndi ulo oru ime, General Directorate of Security, Gendarmerie General Command na Coast Guard Command nkeji n’ime akuko nke ụdị coronavirus ohuru (Covid-19). [More ...]
Oge Iwu ofmụ Amaala 65 na Agbanwego Agbanwewo
Dabere na nkwupụta nke Ministry of Interior, dị ka data meteorological si kwuo, na nyocha nke ọnọdụ ikuku dị na Sọnde, Mee 17, na ntuziaka Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan, ọrịa ya na-adịghị ala ala na afọ 65 na karịa. [More ...]
Eleba anya na nchekwa nchekwa na mkpesa ndị uwe ojii Kovid-19
N'ime akụkọ ahụ ndị isi ndị uwe ojii na-ahụ maka ndị uwe ojii kwadebere, ekwuru na ihe mere n'oge ntiwapụ ahụ gosipụtara na ịbịaru ngalaba nchekwa na nchekwa ezughi ezu, na achọrọ usoro zuru ezu maka nchekwa n'akụkụ a. Ọpụpụ Kovid-19 na Beyond International [More ...]
Onye otu AK Party Rize osote Muhammed Avcı kwupụtara na Rize nyere ozi ọma dị nro nke Onye isi ala maka isticslọ Ọrụ Nleba anya na ọ nọwo na-eche ogologo oge ma kelee Erdogan maka ebe a na-ebuga ya na Rize. AK Party General [More ...]
Mmemme ụgbọ elu pụrụ iche nke ụbọchị 4 maka ndị njem nọ n'okpuru mpụga IZBAN; N’ụbọchị 16-17-18 na 19 Mee, mgbe a ga-etinye oge ịlọta; İZBAN kwuwapụtara na ọ ga-eme atụmatụ njem njem pụrụ iche maka ndị njem hapụrụ. IZBAN siri na twitter [More ...]
Ọrụ akụrụngwa na ọrụ mmeba n'okporo ụzọ ndị otu Karabük Gọọmentị Gọọmentị bidoro n'okporo ụzọ Keltepe Ski Center na-aga n'ihu. Mehmet Uzun, odeakwụkwọ ukwu nke oflọ Ọrụ Ọchịchị Ọpụrụiche Pụrụ Iche, Hasan, Isi nke General General Assembly [More ...]
Usoro okporo ụzọ ụgbọ mmiri nke Samsun-Sivas Kalın, nke ndị Ministri Transportgbọ njem na akụrụngwa gbanwetụrụ wee buo ibu nde tọn kwa afọ, ga-eweta mbupu njem ohuru na njem okporo ụzọ north north. Ndị Turkey [More ...]
Niğde Special Provincial Administration's Front-Storey Crossroad Project na-abịarute Ndụ
Onye isi obodo Niğde Emrah Özdemir agbaala mbọ mee nke a iji hụ na ọrụ dị n'akwụkwọ nta a n'oge usoro ịhọpụta iji mee ka okporo ụzọ dị n'etiti obodo anyị belata. Passgabiga na ngalaba na-egbochi irere okporo ụzọ [More ...]
Nchịkọta mpaghara ọgwụ eji eme ihe na ọgwụgwọ Covid-19 ga-agwụ agwụ na June
Minista oru aka na teknụzụ, Mustafa Varank kọrọ na mkpokọta mpaghara ọgwụ a na-eji na ọgwụgwọ nke ụdị coronavirus ọhụrụ (Covid-19) ga-agwụcha na June. 17 Nkwado maka onye isi okwu Varank tinyere aka na Covid-19 na mmemme o sonyere na ọwa TRT News. [More ...]
KOSGEB ga-akwado ihe ruru puku 70 TL nye ndị SME ga-enweta ọzụzụ site na Model Factory. N’ịkwuputa usoro iwu ahụ, Minista Mmepụta na Ọrụ Nkà na ụzụ, Mustafa Varank ọzọ mesiri ike mkpa mgbanwe mgbanwe dijitalụ n’oge ọrịa a. [More ...]
'Slọ Ọrụ Na-ahụ Maka omogbọala na Azụmaahịa Turkey. E mepere ụlọ ọrụ EIA maka elele eletriki ụgbọ ala eletrik elekere anya ụlọ ọrụ ahụ nke ewepụtara iwu ka ụlọ ọrụ wulite maka ilele. Nkwere na Nnyocha Mmụba Mmetụta Gburugburu Ebe obibi [More ...]
Ọ bụ ụlọ ọrụ ụgbọ oloko na-arụ ọrụ na Saịprọs n’agbata 1905-1951 n’okpuru aha Ralọ Ọrụ Njikwa Ọchịchị Cyprus. Ọ rụrụ ọrụ n'ahịrị n'etiti obodo Evrihu nke Lefke na obodo Famagusta. Afọ nke ọrụ [More ...]